» AKHRI: Qoraa Carbeed oo maqaal qiiro leh ka diyaariyey marxaladda ay Soomaaliya gashay markay dooratay FarmaajoBadweyntimes.com
AKHRI: Qoraa Carbeed oo maqaal qiiro leh ka diyaariyey marxaladda ay Soomaaliya gashay markay dooratay Farmaajo
Nabel Albukiri wuxuu ku dhashy Gobolka Taczi sanadkii 1979, waana saxafi sidoo kalana dhaqdhaqaaq fiican ku leh siyaasadda Yeman wuxuna qoray buugaag badan iyo maqaalo lagu soo bandhigay wargeysyada iyo TV-yada ugu caansan carabta.
Haddaba qoraagaan ayaa doorashadii Farmaajo kadib Soomaaliya ka qoray Maqaalkaan qiirada badan oo uu ku muujiyey waxyaabo badan haddaba hoos ka aqriso maqaalkiisa:
Soomaaliya waa dariishada Rajada ee Carabta?
Dagaalada sokeeye inta badan maahan shar kaliya oo soocan guud ahaan, waxaa laga yaabaa inay ku jiraan kheyr farabadan, balse waxaa ku daboolan qiiqa rasaasta, dhimasho, burbur iyo baaba’a waxaase macquul ah in si fudud looga caafimaado.
Arrintaan ujeedka aan ka leeyahay waa doorashadii ka dhacday guda dalka Soomaaliya bishii February sanadkaan 2017 markaas oo uu si rasmi ah ugu guuleystay madaxtinimada Soomaaliya Musharax Maxamed Cabdulaahi oo ku magac dheer Farmaajo.
Soomaaliya waxay soo martay 20 sano oo marxad foodo miiran, dagaal iyo isku dhacyo sokeeye waxaana lagu waayey boqolaal kun oo qofa, sidoo kalana waxaa ka dhashay Gaajo, dhaawac iyo inay dadka soomaaliyeed ka haajiraan dhulkooda.
Wadankaan wuxuu ahaa mid adduunka dhan ka jeesteen xilli uu ku dhex jiray dhiig, aysana jirin cid soo fiirineyso mid dhaw iyo mid fog, dadka oo dhan waxay arkayeen dhiigga ilmahooda oo daadanayo waxayna noqdeen sida rati qooqan oo aan loo dhawaan karin.
Soomaaliya waxay sanadahaas dhadhamisay qaraarka uu leeyahay aamusnaanta iyo kibirka kalinimada, waxayna damceen inay kaligood is xaliyaan sida qof dhaawac ah oo isku dayayo inuu dhigga ka baxayo kaligiis iska joojiyo isagoo aan xataa heysan qalabka lagu joojinayo dhiigaas waxaya mar kale qoorta la gashay dagaal ay bilaabeen koox diidmeedyo xilli aysan kasoo kabsan dagaal qabiileedkii.
Inkastoo ay intaas oo dhan soo martay haddana ma aysan ka celin inay soomaaliya gaarto xilli ay iyada is doorato weliba si ay ku dheehan tahay kalsooni iyo is aaminaad.
Soomaaliya waxay soo socotaba waxaa ka dhacday doorasho xalaal ah oo ay madaxweyne doorteen 275 Xildhibaan iyo 54 xubno oo aqalka sare ah taasoo hordhac u aheyd inay dadka soomaaliyeed si toos ah oo xor ay madaxweyne u doortaan sanadka 2020 (doorasho qof iyo cod ah)
Doorashadaas ayaana u dhacday si habsami leh, iyadoo ay weliba jirtay cabsi xagga amniga ah, waxaana la ogsoon yahay inay madaxda xilka si nabadgalyo ah ku wareejiyaan.
Labadii madaxweyne ee hore dalka usoo maamulay Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Xasan Shiikh Maxamuud ayaa labadaba ka qeyb qaatay doorashada waxayna kala kulmeyn guuldaro waxayna aqbaleyn inay noloshooda sii wataan iyagoo Muwaadiniin Soomaaliyeed oo caad ah ah waana arrin dhif ku ah inay ka dhacdo caalamka 3-aad gaar ahaan caalamka carbeed, ogowse arrintaan wanaagga badan waxay ka dhacday dalka Soomaaliya oo dhiigooda cabayey muddo sano ah.
In maamulka si nabad ah la isugu wareejiyo weliba wadan uu qaribay dagaal sokeeye waxay ka dhigan tahay inuu jiro caafimaad weyn waxayna caalamka tuseen inay yihiin dad walaal ah oo isku ogol maamulka si kasta oo ay isku soo dagaaleen
Soomaaliya ayaa hadda isku diyaarineyso inay iska caabiso argagixisada dibna ay usoo celiso ciidankii lagu yaqaanay taasina waa waxa uu ku dadaalayo Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo madaxweyne loo doortay kaasoo lagu yaqaan inuu yahay nin shaqo oo cilmi leh, sidoo kalana waa nin hore loosoo tijaabiyey guulna soo gaaray markii uu Ra’isulwasaare Soomaaliya ka noqday sanadkii 2010 markaas oo uu xoogga saaray sidii Soomaaliya u heli laheyd ciidan xoogan wuxuuna si toos ah u bixin jiray mushaarkooda si looga baxo ku tiirsanaanta ciidamada Midowga Africa ee Dalka Joogo.
Waa dhab inay hadda Madaxweynaha iyo dowladda hadda la dhisay ay hor taalo caqabado badan oo ay ugu horreyso in dalka lagu soo celiyo cadaaladii garsoorka waana wadada kaliya ee maanta looga bixi karo caqabadaha ka taagan Soomaaliya, sidoo kalana waxaa ku xigo in lala dagaalamo ciidamada Al-shabab lana dhiso kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka waxayna u baahan tahay dadaal badan iyo iskaashi dhex maro shacabka Soomaaliya iyo dowladda cusub.
Soomaaliya ayaa waxaa hadda ka banaan fursado badan oo maalgelin ah haddii amnigeeda la sugo, waxaana kamid ah fursadaas in lasoo saaro Yooraaniyoomka, Gaaska iyo naftada, sidoo kalana beeraha iyo kheyraadka xayawaanada taasoo uu alle ugu maneystay.
Dariishada rajada ee u furtamay Soomaaliya ayaa ah tusaale cad oo ku filan wadamada carabta waxayna soomaaliya maanta u baahan tahay inay ilaashato iftiinka ay heshay waxayna rajadaan soomaaliya heshay xilli wadamo badan oo ka tirsan carabta ay ka bilowdeen dagaalo sokeeyo oo ka dhashay isku qabsiga kursiga madaxweynimo waxayna u baahan yihiin inay duruus iyo qabrad ka qataan dagaaladii ka dhacay Soomaaliya iyo maanta halka ay joogto.
W/Qoray qoraaga weyn ee u dhashay Dalka Yeman Nabel Albukiri
Waxaa soo turjumay oo Af Soomaali ka dhigay
« Warbixinta Ka HoreysayXog: FARMAAJO oo Taliyaha & Agaasimaha Villa Somalia u Magacaabaya Shaqsiyaad Caan ah…
Warbixinta Xigto »Daawo Sawirro: Golaha Wasiirada oo anxisiyey miisaaniyada 2017 oo lagu daray kharashka aqalka sare